အရောင်မညီညာဘဲ ညစ်ထေးထေးဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေကို ကြည်သန့်သွားစေမယ့် နည်း(၄)မျိုး
အရောင်မညီညာဘဲ ညစ်ထေးထေးဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေကို ကြည်သန့်သွားစေမယ့် နည်း(၄)မျိုး ပျိုမေတို့မျက်နှာအသားအရောင် မညီမညာဖြစ်နေတာ၊ မိတ်ကပ်ပုံမှန်ဖျက်ပေမယ်၊ မျက်နှာသစ်ဆေးကောင်းကောင်းသုံးပေမယ့်၊ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကောင်းကောင်းမသန့်စင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ skin care ပုံမှန်လုပ်ပေမယ့် အသားအရေက ကြည်လင်မှုမရှိဘူး၊ အသားအရောင် မညီညာဘူးဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့် ကြေးချွတ်ပေါင်းတင်နည်းလေးတွေကို အိမ်မှာတင် လုပ်ကြည့်လိုက်နော် …. (၁) နနွင်းမှုန့်ပေါင်းတင်နည်း နနွင်းမှုန့်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် စီ ပမာဏအနည်းငယ်က အသားအရေညစ်ထေးနေတာကို ပြန်လည်ကြည်လင်စေပြီး အသားအရောင် မညီညာတာကို ညှိပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ နနွင်းမှုန့်တစ်ဇွန်းကို ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်နှစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး ရလာတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာအနှံ့ပွတ်လိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက်ထားပေးပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပေးလိုက်ပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး မျက်နှာသစ်တိုင်း ဒါလေးကို လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်လလောက်ကြာရင် ညီညာဖြူသန့်နေတဲ့ မျက်နှာအသားအရေလေးကို ရပါလိမ့်မယ် …
မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွာခဲ့လို့ ကိုယ့်ထက်အသက် 23နှစ်ပိုကြီးတဲ့ မမကိုရအောင် လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့ ကောင်လေး
မင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွာခဲ့လို့ ကိုယ့်ထက်အသက် 23နှစ်ပိုကြီးတဲ့ မမကိုရအောင် လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့ ကောင်လေး ဒီစုံတွဲကတော့ အချစ်စစ်မှန်ရင် အသက်တွေဟာသာမာန်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ပြီး အချစ်စစ်ကိုသက်သေပြလိုက်တာပါပဲ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံက Tan Wanping အမည်ရှိတဲ့ အသက် 23နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာ မိသားစုဝင်တွေအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကမှ အသက် 46 နှစ်အရွယ် Li Liang အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကို ရအောင် ယူပြခဲ့ပါတယ် …။ အဆိုပါစုံတွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ 2015 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက စက်ဘီးပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၊ Li ဟာပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရင်း သူမရဲ့ဘယ်ဖက်ညှပ်ရိုးကို ထိခိုက်မိလို့ Tan ကအကူအညီပေးခဲ့တာကနေ စပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ ထို့နောက် Tan ဟာ Li ကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆေးရုံသို့မကြာခဏအလည်လာရင်းနှင့် …
ထွန်းတောက်လာမယ့် ကြယ်တစ်ပွင့် (သို့) မင်းသမီးရှုံးလောက်အောင်လှတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့သမီးလေး
ထွန်းတောက်လာမယ့် ကြယ်တစ်ပွင့် (သို့) မင်းသမီးရှုံးလောက်အောင်လှတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့သမီးလေး မင်းရာဇာကတော့ မြန်မာ့သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ပရိသတ်တွေကို အစစ်အမှန်တွေပဲ ချပြလေ့ရှိတဲ့ အက်ရှင်မင်းသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားပြီး အနုပညာလောကမှာ ခိုင်မာတဲ့နေရာတစ်ခု ရရှိနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Line Walker-2 မှာလည်း ပါဝင်ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ မင်းရာဇာဟာ အက်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ခပ်မိုက်မိုက် အကြမ်းစားအက်ရှင်အစစ်အမှန်တွေကို ပရိသတ်အတွက်ချပြပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဗွီဒီယိုလောက ပျက်စီးသွားပြီးနောက်မှာ မင်းရာဇာတို့လို အမှန်တကယ်ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် ပေါကားဆိုပြီး ရောပြောခံရတာတွေ၊ အက်ရှင်မင်းသားတွေဆိုပြီး ဈေးနှိမ်ခံရတာတွေရှိလာတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် ပရိသတ်အတွက် ကွဲပြားတဲ့ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ပြန်လာဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက် …
ATMစက်ထဲက ကဒ် ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူးဆိုရင် ဖြေရှင်းရမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း..
ATMစက်ထဲက ကဒ် ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူးဆိုရင် ဖြေရှင်းရမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း.. ပြတ်တုန်း လပ်တုန်း ၂၃ ဆိုတဲ့အတိုင်း… ကိုစိုးဝင်းတစ်ယောက် ATM စက်ထဲက ရှိစုမဲ့စုလေး ထုတ်ပါတယ်…ပိုက်ဆံထွက်မလာတဲ့အပြင် ကဒ်ပါဝါးသွားတယ်….။ အဲဒါနဲ့ ဘဏ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာပေါ့… ဘဏ်က ရုံးပိတ်ရက်မို့လို့ တနင်္လာနေ့ကြရင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်…။ ကိုစိုးဝင်း ဘဝင်မကျနိုင်ဖြစ်ပီ … ။ ပိုက်ဆံသုံးစရာမရှိလို့ လာထုတ်ခါမှ ကဒ်ပါထွက်မလာတော့ဘူးဆိုတော့….ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း ကျုပ်က ရေသောက်နေရမှာလား… အကြံတစ်ခုရသွားပြန်တယ်….ဘဏ် hotline ကိုဖုန်းဆက်ပြီး… ” အမ….အမတို့….***လမ်းက ATM စက်ကြီးကလေ… ကျနော် တစ်သောင်းတည်း ထုတ်တာကို တစ်သောင်းတန်တွေ ၁၀ ရွက်လောက်ထွက်လာတယ်ဗျ… ” မကြာပါဘူး….. ဘဏ်က service team ကြီး ကားတစ်စီးနဲ့ေ၇ာက်လာပါလေရော…..၊ …
နောက်ကျောတက်၊ ဇက်ကြောတက်၊ လက်ပြင်ငုတ်၊ အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ…
နောက်ကျောတက်၊ ဇက်ကြောတက်၊ လက်ပြင်ငုတ်၊ အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ… နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးပါမယ်နော် …. အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်းချင်း လွှတ်ပါ …။ အဆင့် (၂) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်စေ့မှာကပ်ပြီး ခေါင်းကို ရှေ့ဖိနိုင်သလောက် ဖိပါ။ …
ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော်
ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ….ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ကို ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော် ထီဖွင့်ဖို့လ ည်း နီးလာ ခဲ့ပါပြီ….ဒါကြောင့် အစွ မ်းထက်မြက် တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာမ င်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင် ကြီးမှ ကူးယူေ ဖ်ာပြအပ်ပါသည် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည်ပထမစာရေးတံမဲကိုအမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏။ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပေစာတစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူးအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုဂါထာကို ဆဋ္ဌမအာရုံ ပရိသတ်တွေအတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ …
အကျိုးများလှတဲ့ ဆန်ဆေးရည် ငွေလည်းမကုန် ဆိုးကျိုးလည်း မရှိတဲ့ ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ အစွမ်း အံ့မခမ်း
“အကျိုးများလှတဲ့ ဆန်ဆေးရည်” အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲနည်း 🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚 ဆန်ဆေးရေကိစ္စ အခုတလောခေတ်စားနေတယ်။ ဂျာနယ်တခုမှာ ပါတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တရက်ကပဲ တနင်္ဂနွေကျန်းမာရေးအမေးအဖြေ အစီအစဉ်တခုမှာ ဆန်ဆေးရေနဲ့ပက်သတ်ပြီး မေးထားတာရှ်ိလို့ ရေးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဆန်ဆေးရေဆိုတာ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက အဘိုးအဘွားတွေ သုံးစွဲခဲ့တာ ကြားဖူးကြမယ်။ အာယုဗေဒဆေးကျမ်း၊တရုတ်ဆေးကျမ်းတွေမှာလည်း ဆန်ဆေးရေရဲ့အာနိသင်တွေရေးထားတာရှိပါတယ်။ အသားအရေလှတာ၊ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းတာ၊ ဆံသားကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေတာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးပေါ့။ တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဆံသားနဲ့ ပက်သတ်ပြောရရင် (Huangluo) ရွာ တရုတ်မျိုးနွယ်စု တစုဖြစ်တဲ့ (Yao) လူမျိုးစုတွေကို ချန်ထားလို့မရပါ။ အဆိုပါ မျိုးနွယိစုဝင်တွေရဲ့ ပျမ်းမျှဆံပင်အရှည်ဟာ (၆)ပေ နီးပါးရှိလို့ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်စာအုပ်မှာတောင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရပါတယ်။ ထူးခြားချက်က အသက် (၈၀)ကျော်တဲ့ထိ …
ကန်စွန်းရွက်ကြော် ကြိုက်တတ်လား..? အရင်ကထက် ပိုစားကြစို့နော်
ကန်စွန်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ (ကောင်းလွန်လို့နေတိုင်းတောင် စားသင့်ပါသည်လို့ အကြံပြု့ ပါသည် ) သင့်ချစ်ဇနီးက ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်၊ ကန် စွန်းရွက်ချည်ရည်ဟင်း စသဖြင့် ကန်စွန်းရွက်ကို ပင်တိုင်စံ ဟင်းတစ်ခွက်လို မပါမဖြစ် ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့အခါ “ဒီနေ့ လည်း ကန်စွန်းရွက်ပဲလား ကွာ” ဆိုပြီး မညည်း တွားလိုက်ပါနဲ့။ ကန်စွန်းရွက်မှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင် B1၊ ဗီတာမင်စီ၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ သံ ဓာတ်၊ ကာရိုတင်းစတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်တာကြောင့် သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရွက်တစ်မျိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပျော်စေပါတယ် ကန်စွန်းရွက်ဟာ …
အလွယ်ကူဆုံး ကြို့ထိုးပျောက်စေတဲ့နည်း ဒီနည်းလေးကို သေသေချာချာမှတ်ထားလိုက်ပေတော့
အလွယ်ကူဆုံး ကြို့ထိုးပျောက်စေတဲ့နည်း ကြို့ထိုးတာဟာ လူတိုင်းသိတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ထိုးတဲ့အခါ နေရထိုင်ရခက် ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်။ အစာတွေခပ်မြန်မြန်စားမိတာ ၊ အစပ်တွေလို ကိုယ်မစားနိုင်တဲ့ဟာတွေကို စားမိတာ နဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတချို့ကြောင့် ကြိုးထိုးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကုသကြပါတယ်။ ရေများများသောက်ခိုင်းတာ ၊ ထမင်းလုံးဝါးခိုင်းတာ ၊ စိတ်ဆိုးအောင်လန့်အောင်လုပ်တာ ၊ မြေပဲစားခိုင်းစာ စသဖြင့်နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ကြပါတယ်။ တချို့ကြို့တွေက ခဏနေရင် သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် တချို့တလေကျတော့ ရှားပါးစွာနဲ့ ရက်ချီပြီး ထိုးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများအတွက် တစ်သက်လုံးသုံးလာတဲ့ နည်းလမ်းလွယ်လွယ်လေးတစ်ခုကို ပေးချင်ပါတယ်။ တွေ့သမျှလူတိုင်းလည်း ဒီနည်းနဲ့ ပျောက်ပါတယ်။ မယုံပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေတောင် ချက်ချင်းပျောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အစပ်နည်းနည်းစားမိရင် ကြို့ထိုးတတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လုပ်ရင် …
တရားထိုင်ခြင်း၏ အံ့အားသင့်ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ
တရားထိုင်ခြင်း၏ အံ့အားသင့်ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ တရားထိုင်ခြင်းအလေ့အထဟာ ယခုအချိန်မှာ လူသိများထင်ရှားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချမ်းသာသူ ဘီလျံနာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့ကလည်း တရားရှုမှတ်ခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လူဦးရေရဲ့ (၈)ရာခိုင်နှုန်း၊ (၁၈)သန်းဟာ တရားထိုင်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားတိုးစေခြင်းနဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်တယ်လို့လည်း သုတေသီတွေက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို သုတေသနပြုလေ့လာမှုတွေ များစွာရှိသလို လူတွေ တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ တရားထိုင်တဲ့အလေ့အကျင့်ဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ပြောင်းလဲစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သီတင်းရှစ်ပတ်ကြာ တရားထိုင်ခဲ့သူတွေကို လေ့လာခဲ့ရာမှာ လေ့လာသင်ယူမှုမှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံတွေနဲ့ …
Users Yesterday : 1577
This Month : 33762
This Year : 204988
Total Users : 500121
Total views : 2069502